Askar ka tirsan Dowladda Somaliya iyo AMISOM oo lagu Beegsaday Baay – Radio Daljir
Luulyo 20, 2015 6:05 b 0
Isniin, Luuliyo 20, 2015 (Daljir) —Telefishinka Press TV ee laga leeyahay Jamhuuriyadda Islaamka ee Iiraan ayaa baahiyey in ugu yaraan 12 Askari oo isugu jirta Somali iyo kuwa ka socdaa AMISOM lagu dilay iska horimaad ay la galeen Dagaalamayaasha Alshabaabka Somalia.
Wararka uu Press TV helay ayaa sheegay in Askartaasi lagu dilay qarax bam iyo iska horimaadyo ay shalay laa galeen Alshabaab.
Telefishinka waxa uu sheegay inay Alshabaab gaari miineysan la beegsadeen Kolonyo ka tirsan Ciiddanka AMISOM oo ku sugnaa Deegaanka Manaas ee Koonfurta Gobalka Bay.
Telefishinku waxa uu tilmaamay inay 6 Askari ku geeriyootay qaraxaasi, ka hor inta aysan iska horimaadyo fool-ka-fool ah ka dhicin Manaas oo lagu dilay 6 Askari.
Taliye ka tirsan Milliteriga oo aan fasax u haysanin inuu la hadlo Warbaahinta ayaa u sheegay Press TV in ka badan 10 dagaalyahan Alsshabaab lagu dilay iska horimaadkaasi.
Ururka Midowga Afrika ayaa shaaciyey Hawlgal Dagaal oo ka dhan ah Alshabaab, kaasi oo lagu doonayo in la isku furo Goballadda Jubbooyinka.
Dagaalamayaasha Alshabaab waxay tan iyo sannadkii 2006-kii dagaallo kula jiraan Ciiddanka Dowladda iyo kuwa Hawlgalka AMISOM oo tiradoodu ka badan tahay 20,000 oo Askari, kana kala socda dalalka Uganda, Ethiopia, Burundi, Djibouti iyo Kenya.